> Resource > Android > Sida loo Delete Android nuqul Xiriir
Si aad u tirtirto xiriirada nuqul Android, aad ku sawirnaa Xiriirada qalabka Android oo ku tirtirto mid mid. Waxaa ka shaqeeya. Si kastaba ha ahaatee, waxa haddii aad leedahay boqolaal xiriirada nuqul? Taa ka sii daran, dadka qaar xataa wax ka badan hal xiriir. Haddii aad si taxaddar la'aan tirtirto xiriir kuwaas oo dadka, waxaad waayi kartaa iyaga la xiriiri.
Si aad u tirtirto xiriirada nuqul ka Android, waxaad u baahan tahay oo ah Android xiriirada nuqul Faydi. Waxaad isku dayi kartaa Wondershare MobileGo for Android . Dhammaan xiriirada nuqul waxaa lagu muujiyey la magac la mid ah, lambarka taleefanka ama email. Barnaamijka Tani waxay kaa caawinaysaa in aad ku milmaan oo dhan xiriirada nuqul mar.
Download this version maxkamad si xor ah u leeyihiin isku day ah!
Ka saar Android xiriirada nuqul
Download this version maxkamad free on your computer. Markaas iskaan tallaabooyinka fudud ee hoose in ay tirtirto xiriirada nuqul on Android.
Tallaabada 1. Isku telefoonka aad Android kombiyuutarka
First of dhan, rakibi iyo abuurtaan barnaamijkan on your computer. Waxaa ka shaqeeya si aad u wanaagsan in Windows 8/7/2003 / Vista / XP. Markaas, xirmaan telefoonka aad Android la your computer via cable USB ah. Ama, waxaad isticmaali kartaa Wi-Fi sidoo. Ka dib markii aan ogaanno telefoonka aad Android, barnaamijkan tusi doono oo dhan ka kooban, sida music, xiriirada, SMS, furmo suuqa laga bilaabo.
Fiiro gaar ah: telefoonada badan oo Android si buuxda oo ay taageerayaan MobileGo for Android, sida HTC, Samsung. Halkan waxa ku jira ay taageerayaan Android Devices .
Tallaabada 2. Ka saar xiriirada nuqul Android
In geedka buugga bidix, guji "Xiriirada". On xaq, guji "De-nuqul". Barnaamijkan wuxuu ogaan doonaa dhammaan dadka ay khuseyso nuqul telefoonka aad Android. Markaas, dhammaan xiriirada la magac la mid ah, lambarka taleefanka ama email ku qoran yihiin. By default, dhammaan dadka ay khuseyso ay leeyihiin waxyaabaha uu nuqul waxaa lagu saxay. Haddii aad rabto inaad ku biirto qaar iyaga ka mid ah, oo kaliya laga qaban xiriirrada in aadan rabin inaad ku biirto. Markaas at line ugu sareeya, doortaan nooca kulan. Ka dib markii in, guji "midowdo soo xulay", button ee geeska hoose ee saxda ah.
Tani waxay keeni doonaa laydi, akhrinta "Ma hubtaa aad rabto inaad ku biirto koox la doortay sida ku cad Xiisaha Leh?". Haddii ay haa tahay, guji "Haa". Markaas habka laga guurayo bilaabmin. U hubso in aad telefoonka Android xiran yahay. Marka uu dhamaado, guji "OK".
By default, barnaamijkan doono xiriirada gurmad hor biirtay.
Taasi waa! Way fududahay in ay ka saarto xiriirada nuqul on Android, soo maaha?
Iyadoo MobileGo for Android, waxaad samayn kartaa waxyaabo badan saarto xiriirada nuqul Android. Haddii aad isticmaasho Lugood, waxaad samayn kartaa maktabadda Lugood in telefoonka aad Android wareejiyo music . Haddii aad qoraal badan, waxa aad awoodi kartaa in ay gurmad fariimaha qoraalka ah si aad u computer sidoo kale.